Brand Kukwana Kuratidzira Zvemukati Kumhanyisa | Martech Zone
Brand Kukwana Kuratidzira Zvemukati Kumhanyisa
Svondo, Nyamavhuvhu 19, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Pane dambudziko riri kuremadza masangano izvozvi. Zviri havukavu. Dhipatimendi rekushambadzira iro rinoramba richikurumidza uye rinosundira zvirimo kunze nekumhanya kuri kubudirira. Dhipatimendi rekushambadzira rakaremara neakakwana mhando riri kukundikana. Ndidzo tsumo dzekare dzekamba netsuro.
Kamba yaigara ichikunda. Iwo makambani akagadzira akajeka, akakwana mameseji uye mifananidzo zvaigara zvichizviita kumusoro. Makambani asina chiratidzo chakasimba aizosiiwa kumashure… asina kuvimbika uye asingazivikanwe sezvo chiratidzo chakakwaniswa chakaba chinoonekwa uye kufarira kwetarisiro yavo.
Musika wacho wakashanduka, zvakadaro, uye ikozvino vatengi vanotaurirana nekutsvaga kwavo kwavanotevera kutenga, vachipa kushoma ziviso (kana kiredhiti) kune iyo brand. Ivo, pachinzvimbo, vanotsvaga rairo kubva kushamwari uye mhuri, ongororo kubva kune vausingazive, uye vanoda kuvhura nhaurirano nekambani pachinzvimbo chekuendeswa kunzwi tsamba kana email. Ivo vanoda mhinduro, kwete marogo akanaka, mawebhusaiti, kushambadza uye masirogani.
Marudzi akapfupika uye mahares ave kuhwina. Mhando dzisina kukwana dzinotsigirwa - uye dzinotobudirira mazuva ano - kana kambani yavo iri kupa tarisiro ine kukosha uye nzwisiso. Chiratidzo, sirogani uye chigadzirwa chakanaka hachina kukwana mazuva ano kukwezva ruzhinji. Panzvimbo iyoyo, timu inopa kutungamira uye hutungamiriri yakakosheswa kupfuura chigadzirwa chaicho.
Saka ndechipi? Kamba ye brand kukwana kana tsuro yemukati yekumhanyisa iyo inokunda mujaho?
Ndinofunga kuti tsuro iri kuburitsa kamba. Mabhandi chikamu chakakomba chehurongwa hwako hwese, asi kana kukwana kwechiratidzo icho kuchinyanya kutadzisa kugona kwako kutaura nevaya vanoda uye vakamirira kudaro, hausi kuzadzisa zvinotarisirwa pamusika wako. Iwo musika uri kuda kuti iwe utaure navo kazhinji kuti upe kukosha.
Musika hausi kutsvaga kukwana, kuri kutsvaga mhinduro. Mhando hombe dzinogona kubudirira, asi kwete kunze kwekunge dzawana kunetseka kwetsuro. Iwo mahares anogona kutyaira tani yebhizinesi… asi ivo vanofanirwa kugadzikisa yavo mhando nekufamba kwenguva.
Mimwe mienzaniso yeBrand pamusoro peKumhanya:
Makambani anodurura pamusoro peiyo infographic dhizaini kwemwedzi kuti atore zvese zvakadzama. Infographics inogovaniswa zvichibva pa zvose zviri zviviri dhizaini uye iyo data. Yese infographic haisi kuzoenda nehutachiona. Tora infographic kunze uko, dzidza kubva pamhedzisiro, uye tanga kugadzira inotevera. Kuwana hafu yegumi nembiri infographics kumusika inotaridzika zvakanaka zvirinani pane kusawana chero kunze uko zvachose.
Makambani anonetsekana nekutaura nyaya yakakwana zvekuti vanofuratira chokwadi chekuti muverengi haasi kutsvaga nyaya zvachose. Vane dambudziko uye varikutsvaga chekugadzirisa. Kana iwe ukachigadzirisa, ivo vanozoita kutenga. Kana zvese zvaunazvo inyaya, iwe ucharasikirwa nebhizinesi kune avo vane mhinduro.
Makambani ane webhusaiti inoziva isingabatsiri iyo isingaite, ichizeza kudhonza chinokonzera kutsikisa webhusaiti nyowani iri nani… asi isina kukwana. Zvinotyisa kuti iwe urikugadzira dhizaini pfuma, asi izvozvi iwe unongoda chimwe chinhu chinoshanda. Itai kuti ishande, natsa sezvaunoenda.
Makambani haawanzo kunetsekana nekumhanyisa nekuti ane mashoma nzira yekuyera mari yavari kurasikirwa nayo. Sezvo isu tichishanda nemakambani kuvasundidzira kuti vawedzere kunonoka, isu tinowanzo gumbuka pahuwandu hwekukanganisa vanhu vane, kunyanya zvichibva pakukwana, vasati vaenda kunorarama. Kana tangoenda kunorarama, zvakadaro, kambani inowanzodzoka uye yoti… ndinoshuva dai takadai takaita mwedzi yapfuura.
Ini handisi kukurudzira kubayira chiratidzo chako. Ndiri kukurudzira kuwirirana pakati pekumhanya uye mhando kuitira kuti ugone kuwedzera uye kuwedzera zvese kuti uvandudze kushambadzira kwako kwese.
Tags: muchisoContent Marketingevanhu vezvenhauhavukavunzira
Webhusaiti Kutanga Maonero
5 Pepa Email Kushambadzira Zororo Rekutarisa